Wireframe विकास उपकरणहरू अन्तर्क्रियात्मक प्राप्त Martech Zone
शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१ 17 Douglas Karr
पछिल्लो वर्षको लागि, म एक वायरफ्रेम उपकरण पत्ता लगाउन संघर्ष गरिरहेको छु जुन सरल थियो, सहयोगी उपकरणहरू थपे, र वास्तवमा अन्तर्क्रियात्मक कम्पोनेन्टहरू थिए जसले एचटीएमएल वस्तुहरू र तत्त्वहरूले वास्तवमा कसरी काम गरे भनेर नक्कल गर्दछ। मेरो खोजी भर्खर समाप्त भयो हटग्लु.
तिनीहरूको साइट बाट: हटग्लु एक धनी ईन्टरनेट अनुप्रयोग हो जुन वेबसाइट वा वेब प्रोजेक्टहरूको लागि कार्यात्मक अनलाइन वायरफ्रेमहरू निर्माण गर्न डिजाइन गरिएको हो। पूर्ण अन्तरक्रियात्मक अनलाइन प्रोटोटाइपहरू सिर्जना र साझेदारी गर्नुहोस्। सहकर्मीहरूसँग सहकार्य गर्नुहोस् र ग्राहकहरूसँग आउटपुट साझा गर्नुहोस्। हट परियोजना कुनै पनि वेब प्रोजेक्टमा काम गर्नेको लागि उत्तम खेल हो।
Hotgloo को बारे मलाई के मनपर्दछ त्यो ट्याब गरिएको ईन्टरफेस, अक्रिडन्स, नक्शा र चार्ट जस्ता कार्य गर्ने तत्वहरू थप गर्ने क्षमता हो। प्रत्येक पृष्ठ तपाईंले पृष्ठ मा ड्रप वास्तव मा अन्तर्क्रियात्मक छ ... ताकि तपाईं आफ्नो ग्राहकलाई एक संग प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ कार्यरत, अन्तर्क्रियात्मक वायरफ्रेम केवल अझै पनी तस्विरहरु भन्दा अन्तर्क्रियात्मकता प्रदान गर्दछ। यो गत हप्ता, मैले एजेन्सीमा वायरफ्रेमहरू पठाउनुपर्‍यो र हटग्लुको साथ, यसले बहु पृष्ठहरू र अन्तर्क्रियाको साथ सम्पूर्ण साइटलाई रूपरेखा गर्न मलाई २ घण्टा भन्दा कम समय लाग्यो।
तपाइँको क्लाइन्टसँग प्रोटोटाइपमा टिप्पणीहरू तान्न र टिप्पणी गर्न वा प्रश्नहरू छोड्ने अवसर पनि छ। यदि मेरो Hotgloo को लागी एक इच्छा थियो, यो उप पृष्ठहरु को लागी सोध्नु पर्छ। हालसालै, सबै पृष्ठहरू साइडबारमा एक सूचीमा बस्छन्। कोटीहरू वा पृष्ठ अन्तर्गत पृष्ठ थप्ने क्षमता भएमा जटिल साइटहरू वा परियोजनाहरू व्यवस्थित गर्न राम्रो हुनेछ।
मूल्य निर्धारण अत्यंत किफायती छ, एकल प्रयोगकर्ता देखि $ at मा प्रतिमाह users with un असीमित प्रयोगकर्ताको साथ एक इन्टरप्राइज संस्करण सम्म। यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईले टोली इजाजतपत्रको लागि month pay एक महिना तिर्न सक्नुहुनेछ!
टैग: सहयोगलेआउट उपकरणहरूपृष्ठ लेआउटवेब पृष्ठ लेआउटwireframeवायरफ्रेम उपकरणहरूतारफ्रेमिंग
गोवाल्ला चेक इन माउस हाउसमा
अगस्ट,, २०१ 14 2011:२१ अपराह्न
समीक्षा डगलस को लागी धन्यवाद। संस्करण for.० को लागी हेर्नुहोस्, जुन १ Aug अगस्ट जारी भइरहेको छ।
यसलाई अगाडि हेर्दै, वुल्फ!